Vidio ny fanafody presklinika rehetra [Visa, Master, PayPal & Wire]
Inona no atao hoe fanaintainana?
Ny fanaintainana dia fahatsapana tsy te hiaina. Ny fanaintainana dia tena ilaina amin'ny fonosana velona antsika hahafahantsika mifandray amin'ny tontolo iainantsika, saingy misy karazana fanaintainana izay tsy tokony hiainantsika. Ny karazana fanaintainana ratsy indrindra dia ilay karazana sarotra esorina, na amin'ny teny hafa, fanaintainana maharitra. Ny fanaintainana maharitra dia mety hisy fiantraikany amin'ny lafim-piainan'ny olona rehetra ary manasarotra ny fitazonana fomba fiaina mahazatra.
Ny sasany amin'ireo fanafody be mpampiasa indrindra dia ny fanafody fanaintainana izay ampiasaina mba hahitana taratra fanaintainana malefaka sy maharitra. Izy ireo dia azo ampiasaina mba hanafoanana ny fanaintainan'ny vatana sy ny aretin'andoha, ny fanaintainan'ny lamosina ary ny hozatry ny hozatra ary koa ny fanaintainana mafy izay vokatry ny aretina toy ny homamiadana na fanaintainana aorian'ny fandidiana.
Fitantanana fanaintainana: fanafody fanaintainana noho ny fanaintainana
Tsy mila miaina amin'ny fanaintainana isan'andro ianao. Misy zavatra azonao atao hahazoana ny fanamaivanana fanaintainana izay mendrika anao; ary mety eo an-tanan'ny rantsan-tananao izany. Azonao atao ny mahazo an-tserasera ny fanafody fanaintainanao.
Ny fanafody fanaintainana dia ampiasaina hifehezana ny fanaintainana. Mila mihinana ny fanafody fanamaivanana fanaintainana araka ny voalaza ianao mba hiasa. Raha tsy raisinao araka ny filaharana voatondro izany dia mety tsy hahomby toa ny vokany raha mampiasa araka ny torolalana ianao.
Iza amin'ireo karazana fanafody fanaintainana no misy?
Ny fanafody fanaintainana dia fanafody ampiasana be loatra hanakanana sy hifehezana ny fanaintainana amin'ny karazany rehetra, na fanaintainana malemy, mafy na mitaiza. Izy ireo dia misy amin'ny karazany sy endrika maro, toy ny marika na koa kinova mahazatra, araka ny voatondro ary koa ny fanafody fametahana. Miankina amin'ny karazany sy ny heriny ary koa ny filan'ny marary, izy ireo dia azo omena toy ny takelaka na kapsula, am-bava ho ranon-javatra, toy ny fampiharana lohahevitra toy ny menaka na menaka manitra, na tsindrona intravenous handeha mivantana amin'ny lalan-dra. Amin'ny toe-javatra tsirairay, dia tokony horaisina araka ny voalazan'ny dokotera izy ireo mba hisorohana ny fampiasana zava-mahadomelina, antso mivantana sy tolo-kevitra avy amin'ny The National Institute on Abuse Drug.
Mba hahatakarana ny fomba fampiasana painkiller isan-karazany hanamaivanana ny fanaintainana, dia mila mahatakatra ireo zava-mahadomelina ny tenany. Misy fanasokajy fototra roa ny fanafody fanaintainana, ny narcotic sy ny non-narcotic. Raha ny mahadomelina dia mazàna no mpamono fanaintainana matanjaka kokoa, raha ny fanafody fanaintainana tsy rongony kosa dia matetika ampiasaina miaraka amin'ny sasany izay hita eny ambonin'ny kaontera. Ireto misy karazana fanafody fanaintainana isan-karazany:
NSAID (zava-mahadomelina tsy miady amin'ny steroid)
Ny zava-mahadomelina anti-inflammatoire tsy steroidal dia iray amin'ireo karazana mpamono fanaintainana mahazatra. Voasokajy ho tsy mahadomelina, ireo fanafody fanaintainana ireo dia sady manala fanaintainana, mampihena ny fahasosorana sy ny fivontosana ary azo ampiasaina hampihena ny tazo ihany koa. Miasa toy ny acetaminophen amin'ny lafiny maro izy ireo saingy mampidi-doza satria mety hiteraka voka-dratsy toy ny aretim-po sy fivalan-kibo raha tsy raisina tsara. Ny anarana mahazatra eo ambanin'ity faneva ity dia fanafody toy ny aspirinina. naproxen, celecoxib, ibuprofen ary diclofenac.Ny zava-mahadomelina anti-steroidal anti-inflammatoire dia misy fiatraikany lehibe, satria manalefaka ny ra. Izany dia mety hiteraka olana amin'ny fivontosana ary ny olana amin'ireo izay mety manana tosi-dra ambany dia handeha hiditra amin'ny fandidiana. Ny ankamaroan'ny olona izay miomana hiditra amin'ny fandidiana dia asaina tsy mandray karazana NSAID mandritra ny herinandro vitsivitsy alohan'ny hanaovana ny fitsaboana mba hahafahan'ny ra mihombo indray.
Ireo vondron'ireo fanafody fanaintainana miorina amin'ny paracetamol dia matetika antsoina hoe Tylenol. Ny fampifangaroana fanaintainana hafa dia misy paracetamol sy codeine antsoina hoe Co-codamol, ary paracetamol sy dihydocodeine izay fantatra amin'ny anarana hoe Paracodol.
Ny acetaminophen dia miasa saika mitovy amin'ny NSAID, miasa ho toy ny fanafody fanaintainana ary koa amin'ny fampihenana ny tazo. Ny tena maha samy hafa azy ireo dia ny acetaminophen dia tsy miasa ho anti-inflammatoire, ary tsy manalefaka ny ra toa ny NSAIDS.
Ny acetaminophen dia tsy azon'ireo misotro toaka be na olona manana aretin'ny aty. Ity karazana fanafody fanaintainana ity dia mety ho mafy be amin'ny atiny, manimba azy raha tsy mandeha tsara. Manoro hevitra anao raha manana zava-pisotro mihoatra ny roa isan'andro ianao manatona dokotera alohan'ny handraisana an'io karazana fanafody fanaintainana io. Ny acetaminophen dia matetika hita amin'ny ankamaroan'ny fanafody mpanohitra.
Ireo no fanafody fanaintainana matanjaka indrindra azon'ny dokotera omena. Ny ankabeazan'ny fanafody panafom-panafody dia misy fiantraikany mivantana amin'ny atidoha sy ny rafi-pitabatabana afovoany, ary tsy tokony hampiasaina amin'ny dokotera na fanaraha-maso fotsiny. Misy fanasokajy fototra telo ny fanafody fanaintainana narotika;
• Fanaintainana voajanahary voajanahary - ireo dia karazana fanafody fanaintainana vita mivantana avy amin'ny opium, ary mety ahitana morphine sy codeine. Ireo dia matetika ampiasaina ho toy ny fanafody aorian'ny fandidiana.
• Fanafody narcotic semi-synthetic - ireo dia fanafody fanaintainana izay voajanahary amin'ny ampahany ary noforonin'ny olona, ​​anisan'izany ireo akora simika isan-karazany amin'ny singa voajanahary. Anisan'izany ny oxycodone, hydrocodone ary heroin.
• Fanafody narcotic synthetic- opioid synthetic tanteraka ary mety ahitana ny fanafody Fentanyl sy Sufentanil. Ireo fanasokajiana ireo dia misy lisitra derivatives lava koa.
Ny fanafody fanaintainan'ny zava-mahadomelina dia manana fironana mampidi-doza ny fananganana fahazarana, ary ny marary izay eo aminy dia harahi-maso akaiky amin'ny dokoterany. Miaraka amin'ny fanararaotana fanafody fanafody, ny ankamaroany dia avy amin'ireo karazana fanafody fanaintainana. Ny zava-mahadomelina dia tsy tokony horaisina raha tsy misy fanaraha-maso akaiky momba ny fitsaboana.
Ahoana ny fampiasana fanafody fanaintainana?
Ny ankamaroan'ny fotoana manaintaina dia ilaina mandritra ny andro vitsivitsy monja ary hihatsara ny aretina raha tsy hoe mijaly amin'ny fanaintainana maharitra izay mety ho lava kokoa ny faharetany. Raha ny ankamaroan'ireny fanafody fanaintainana ireny dia azo vidiana amin'ny fividianana ka aleo manatona dokotera na mpivarotra fanafody alohan'ny hitondrana azy ireo, indrindra raha misy te-hitondra azy ireo mihoatra ny fe-potoana 3 andro voatondro.
Inona avy ireo voka-dratsin'ny fanafody fanaintainana?
Na dia ampiasaina matetika aza ny fanaintainana amin'ny karazana rehetra, ny fanafody fanaintainana dia misy ny vokany sy ny fiatraikany manokana. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny fampiasana lava ny zava-mahadomelina na fanitsiana tsy araka ny tokony ho izy dia mety hiteraka vokadroa sy fiankinan-doha izay manomboka mitondra vokany ratsy eo amin'ny fahasalaman'ny mpampiasa izany. Zava-dehibe ny manamarika fa ny miaraka amin'ny toetran'ny fampiasana ny tanjaky ny zava-mahadomelina dia vokatry ny mety ho vokany - malefaka na mahafaty. Jery ​​todika amin'ny sasany amin'ny voka-dratsin'ny fampiasana fanafody maharitra:
• Zava-mahadomelina - Ny olana amin'ny vavony sy ny tsy fihinanan-kanina dia fahita matetika amin'ny fanafody fanaintainana. Ireo dia azo aseho amin'ny endrika fivalanana, fivontosana na marary vavony. Miaraka amin'ireny dia mety hitranga amin'ny fisaleboleboana sy fandoavana indraindray ny mpampiasa miaraka amin'ny olana amin'ny urinary.
• Olana amin'ny hoditra - Raha raisina mandritra ny fotoana maromaro, ireo fanafody fanaintainana ireo dia miteraka olana amin'ny hoditra maro toy ny fery, mangidihidy ary ny fivezatra. Ny fahatsapana bebe kokoa amin'ny hoditra dia mety ho vokatry ny fampiasana lava mpamono fanaintainana.
• Olana amin'ny fisefoana - Ny fampiasana maharitra ny mpamono fanaintainana koa hitarika karazana olana amin'ny taovam-pisefoana toy ny fanempotra sy ny fihenan'ny tratra, ny fitomboan'ny fitempon'ny fo ary koa ny fahasarotana amin'ny fifohana rivotra.
• Mahantra fahitana - Ny fampiasana painkiller dia mety hiteraka olana amin'ny fahitana marobe, indrindra raha ny tanjaky ny zava-mahadomelina dia nanjary vokadratsin'ny vokadratsiny. Anisan'izany ny toe-javatra toy ny fahitana manjavozavo sy ny fahatsapana tsipika spidery eo amin'ny sisin'ny fahitana.
• Akis sy fanaintainana - Na dia ampiasaina hitsaboana karazana fanaintainana isan-karazany aza izy ireo, dia mety hiteraka fanaintainana sy fanaintainana hafa amin'ny vatana toy ny fanaintainan'ny hatoka sy lamosina ary hatramin'ny aretin'andoha mihitsy aza ny fampiasana lava ny fanafody fanaintainana.
• Aretin-tsaina - Ny tanjaky ny zava-mahadomelina sy ny fampiasana maharitra dia mety hitarika fikorontanana ara-tsaina ihany koa ary hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ireo mpampiasa. Ireo dia mety misy ny voka-dratsy toy ny fisavoritahana sy ny fitaintainana, ny fikorontanana ary ny fientanam-po ary koa ny nofinofy tsy misy dikany amin'ny sasany.
Ahoana no hividianana fanafody fanaintainana amin'ny Internet?
Tsotra ny manafatra ireo fanafody fanamaivanana fanaintainana ilainao hitazonana fomba fiaina tsy misy fanaintainana. Mora sy maimaim-poana izany. Tsy mila dokotera hanafatra an'ireny fanafody fanaintainana ireny amin'ny Internet ianao. Voaro tanteraka ny fiainanao manokana ary afaka manafatra amin'ny masonay tsara ianao. Ny ampahany tsara indrindra amin'ny fanafarana fanafody fanaintainana amin'ny Internet dia ny tsy fisian'ny fiandrasana. Afaka alefa amin'ny varavarana fidinao izy ireo afaka andro vitsivitsy. Tsy mbola nisy fomba mora kokoa nanamaivana ny fanaintainanao isan'andro.
Ny fivarotam-panafody an-tserasera dia matihanina sy tsy ara-dalàna ary izany no antony rehefa mividy fanafody fanaintainana amin'ny Internet ianao dia azonao antoka fa zava-dehibe aminay ny fiainanao manokana. Halefa daholo ny kaomandy rehetra raha tsy misy ny mari-pamantarana fivarotam-panafody mba hotazonina ho tsiambaratelo ny baiko rehetra. Tsy mila miatrika mifanatrika mivantana amin'ilay mpivaro-panafody ianao na mijery ireo mpivarotra hafa.
Misy fanafody fanaintainana maro samihafa hisafidianana ary manapa-kevitra hoe iza no tsara kokoa aminao sy ny fanaintainanao. Ny fanafody isan-karazany dia samy manana ny fampiasana azy ary tsy an'ny rehetra ny rehetra. Tsy maintsy manombatombana ny fepetra rehetra izay mihatra ianao ary mitandrema haka ireo izay tsy hanelingelina ny toe-javatra nisy teo aloha na ireo fanafody hafa izay efa noraisinao. Ny mpivarotra fivarotam-panafody an-tserasera dia afaka manampy anao hamaritra ny safidy tsara indrindra ho anao ary mahafeno ny filanao fanaintainana.